पहिलो चरणमा यी तीन जनालाई मन्त्री बनाउदै देउवा, के बिनोध चौधरी अर्थमन्त्री बन्दैछन ? — Imandarmedia.com
पहिलो चरणमा यी तीन जनालाई मन्त्री बनाउदै देउवा, के बिनोध चौधरी अर्थमन्त्री बन्दैछन ?
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आज (मंगलबार) प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुन लागेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो चरणमा तीनजना मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले आफ्नो दल कांग्रेस र सत्ता साझेदारी गर्न लागेका दलहरूसँगको छलफलमा पहिलो चरणमा तीनजना मन्त्रीलाई मात्रै शपथ गराउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार देउवाले कांग्रेसबाट एक, माओवादीबाट एक र जसपाबाट एकजनालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । देउवानिकट स्रोतका अनुसार कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मात्र मंगलबार मन्त्री बनाउने मनशाय देउवाले व्यक्त गरेका छन् । उनले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालासँग पनि यसबारे छलफल गरेका छन् ।
‘परिस्थितिमा कुनै फेरबदल भएन भने आज तीनजना मन्त्रीले मात्रै शपथ लिन्छन्, कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुने सम्भावना छ,’ देउवानिकट नेताले बताए । ३० दिनभित्र संसद्‍मा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान भएकाले त्यसअघि ठूलो मन्त्रिपरिषद् नबनाउने तयारी देउवाले गरेको पनि ती नेताले बताए । यस्तै बिनोध चौधरी पनि अर्थमन्त्रीका लागि लबिङ्गमा रहेको बुझिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्कै गठनबारे छलफल गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका छन् । पेरिसडाँडामा पार्टी बैठक सकेर दाहाल देउवालाई भेट्न पुगेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को संख्या र सदस्यबारे उनीहरूले टुंगो लगाउने एक माओवादी नेताले बताए ।
राष्ट्रपति कार्यालयले हिजै देउवालाई मंगलबार शपथ हुने जानकारी गराइसकेको छ । मंगलबार दिउँसो २ बजे कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दैछन् । अदालतले मंगलबार ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी गरेको छ ।